Codsadayaasha Sinnaanta Bulshada ee Sharci Ahaanshaha Xashiishka ee Illinois Ma u qalantaa?
Codsadayaasha Sinnaanta Bulshada ee Illinois
Waa maxay Codsadaha Sinnaanta Bulshada ee Illinois?
codsadaha sinnaanta bulshada Illinois
Codsade Sinaanta Bulshadeed ee Illinois wuxuu ku deeqayaa 20% wadarta dhibcaha ee codsiyada shatiga cannabis ee kooxda.
Muxuu Illinois U leeyahay Codsadayaasha Sinnaanta Bulshada?
Marka loo eego cilmi-baaris lagu sameeyay gobolka Illinois, waxaa la ogaaday in xannibaadaha ka yimid sharciyadii hore ay ku adkaadeen dad badan inay ku biiraan warshadaha marijuana, tanina waxay abuurtay sinnaan la'aanta bulshada ee sii kordheysa maalinba maalinta ka dambeysa. Sharciga cusub ee Illinois ujeedadiisu waa inuu hagaajiyo tan isagoo abuuraya "Codsadayaasha Sinnaanta Bulshada" si loo yareeyo caqabadaha ka horjoogsanaya dadka xilliyadii hore inay soo galaan warshadaha sidaas darteedna u abuuraya sinnaanta bulshada sharci u ahaanshaha sharci ee cannabis ee Illinois. Caqabadaha noocan oo kale ah waxaa ka mid ah helitaanka raasamaal la'aanta saboolnimada, iyo arrimo kale.
Codsadayaasha Sinaanta Bulshada Podcast ee Illinois
Si aad u aqriso sharciga codsadaha sinnaanta bulshada ee Illinois - Riix Halkan
Waayo, Khariidadda Aagga Saamaynta ku Dhex Leh ee Faa'iidada - Halkan Riix Halkan
Qeexitaanka Codsadaha Sinnaanta Bulshada ee Illinois
Codsadaha Sinnaanta Bulshada" waxaa loola jeedaa codsade ah degane Illinois oo la kulma mid ka mid ah shuruudaha soo socda:
(1) codsade leh ugu yaraan 51% lahaansho iyo xakameyn hal ama in kabadan oo shaqsiyaad ah ugu yaraan 5 ka mid ah 10kii sano ee la soo dhaafey aagga Saamaynta Ku Yeeshay;
(2) codsade leh ugu yaraan 51% lahaansho iyo xakameyn mid ama in ka badan shaqsiyaad kuwaas oo:
(i) in loo qabtay, lagu xukumay, ama lagu xukumay ciqaab fal dambiyeed kasta oo u qalma in lagu gumaado sida ku xusan Xeerkan; ama
(ii) waa xubin ka tirsan qoyska saamaynta ku yeeshay;
(3) codsadayaasha ugu yaraan 10 shaqaale ah oo waqti-buuxa ah, codsade leh ugu yaraan 51% shaqaalaha hadda jira kuwaas oo:
(i) hadda ku nool yahay Aag Saamayn ku Leedahay; ama
(ii) ayaa loo qabtay, lagu xukumay, ama loo xukumay ciqaab kasta oo u qalma uumiga sida uu dhigayo sharcigaan ama xubin ka mid ah qoyska saameynta leh.
Codsada Sinaanta Bulshadeed ee Loogu Talagalay Cannabis Dispensaries
Oktoobar 1, 2019 - The Gobolka Illinois wuxuu siidaayay codsigiisii ​​xashiishadda cannabis. Codsigan wuxuu lahaa luqado aad muhiim ugu ah hibadaada sinnaanta bulshada ee kooxdaada.
Haddii codsaduhu rabo inuu u codsado sidii Codsade Sinaanta Bulshada, keen caddeyn muujineysa heerka Codsadaha Sinnaanta Bulshada. Caddaynta heerka ahaanta Codsadaha Sinnaanta Bulshada waxaa lagu dhisi karaa iyadoo la bixinayo:
Caddaynta heerka codsadaha ee ah “Degane Illinois” sida lagu muujiyey dukumiintiyada wax lagu daro, ama, haddii shaqsi ahaan loo dalbanayo, ugu yaraan laba ka mid ah waxyaabaha soo socda: (i) heshiis kiro oo saxeexan oo ay ku jiraan magaca codsadaha, (ii) fal hantiyeed oo ay kujirto magaca codsadaha, (iii) dugsiga diiwaangelinta, (iv) kaarka diiwaangelinta cod bixiyaha, (v) laysanka darawalka ee Illinois, kaarka Aqoonsiga, ama Qofka haysta kaarka Aqoonsiga Naafanimada, (vi) jeega jeegga, (vii) biilka adeegga, ama (viii) wixii caddeyn kale ah degenaanshaha ama macluumaadka kale ee daruuriga u ah dejinta deganaanshaha. Qofka waa in lagu meeleeyay gobolka muddo 30 maalmood ah si uu u noqdo "degane Illinois" sida loo adeegsaday codsigan.; iyo
Caddayn qofka ama shakhsiyaadka leh ama xukumaya in kabadan 51% ee ururinta la soo bandhigo ayaa ku noolaa a Aag Saamayn Leh Oo Awood Leh 5 ka mid ah 10kii sano ee la soo dhaafay sida lagu muujiyey, laakiin aan ku xaddidnayn, diiwaangelinta canshuurta, diiwaangelinta codbixiyeyaasha, kireeyaha, amaahda guryaha, jeegagga jeega, biilasha adeegyada, foomamka caymiska, ama diiwaannada dugsiga ee ay ku jiraan magacyada saraakiisha u qalmidda magacyadooda; or
Caddayn qofka ama shakhsiyaadka leh ama xukumaya in kabadan 51% ee ururinta gudbinta la soo bandhigay waxay ahaayeen loo xirey, lagu xukumay, ama loo xukumay ciqaab ka dhan ah fal kasta oo loo qalmo qulqulka Qaanuunka Dadweynaha 101-0027. Haddii qabashada, xukun-ku-qaadid, ama xukun-ku-qaadid la shaabadeeyey ama la duubay, bixi diiwaannada ficilkan oo kale; or
Caddayn qofka ama shakhsiyaadka leh ama xukumaya in ka badan 51% ee ururinta gudbinta la soo bandhigay waxay leeyihiin a waalid, mas'uul sharci ah, cunug, sayga / xaaskaaga, ku tiirsan, ama ahaa ku tiirsan of qof ka hor Juun 25, 2019, ayaa loo qabtay, lagu xukumay, ama loo xukumay ciqaab ka dhan ah fal kasta oo loo qalmo uumibixinta Sharciga Dadweynaha 101-0027. Haddii qabashada, xukunku, ama xukun maxkamadeed la shaabadeeyey ama la duubay, bixi diiwaannada ficilkan oo kale. Codsaduhu waa inuu sidoo kale keenaa caddeyn xiriirka ka dhexeeya sarkaalka maamulaha codsadaha ama saraakiisha iyo qofka loo xiray, lagu xukumay, ama loo xukumay ciqaab kasta oo loo idmay inuu muteysto baabi'intii Sharciga Dadweynaha 101-0027; or
Caddayn in codsaduhu uu shaqaaleynayo 10 ama in ka badan oo ah shaqaale saacado buuxa shaqeeya, iyo caddeyn ah in 51% ama in ka badan oo ka mid ah shaqaalahaas ay u qalmi doonaan sidii codsadayaal Sinaanta Bulshadeed iyada oo la raacayo mid ka mid ah shuruudaha lagu soo saaray qodobbada 2, 3, iyo 4 ee ka sarreeya, haddii shaqaaluhu ay ahaan lahaayeen iska leh oo gacanta ku haya 51% ururkan la soo jeediyo. Codsaduhu wuxuu bixin karaa caddeyn sida kor lagu sharaxay shaqaale kasta. Codsaduhu sidoo kale waa inuu siiyaa caddeyn ah in shaqaaluhu ay ku hawlanaayeen shaqo waqti-buuxa ah ilaa taariikhda la soo gudbiyay arjiga. Haddii macluumaadka shaqaalaha ama xaaladda shaqaalaynta ee shaqaalaha ay isbedelaan kahor inta aan la bixin liisamada, codsaduhu waxaa ku waajib ah inuu ogeysiisto Qaybta isbedelka macluumaadka shaqaalaha ama xaalada.
Macluumaad dheeri ah oo ku saabsan Sinnaanta Bulshada ee Gobolka Cannabis
Isticmaalka naxariista leh ee Barnaamijka Barnaamijka tijaabinta daroogada Xashiishka ee Caymiska Bulshada ee Naafada ah 2014
Isticmaalka Iskuduwaha 2014 ee Xeerka Barnaamijka Xashiishka Caafimaadka ee loo oggolaado isticmaalka xashiishadda caafimaadku waxay si aad ah u xaddidan tahay dadka doonaya inay maalgashadaan warshadaha marijuana. Ficilkan ayaa la yimid caqabado sababay inay dadka ku adkaato inay ganacsi ku yeeshaan waaxdan. Milkiilayaasha hadda tirada yar ma ahan kuwo ka turjumaya tirada guud ee gobolka maxaa yeelay waxay xireysaa qof kasta oo aan haysan kheyraad ama aqoon sida uu ganacsi uga dhexeeyo waaxdan.
Barnaamijka sinnaanta bulshada ayaa la sameeyay ka dib markii barnaamijka tijaabada ah la ogaaday inuu eexsan yahay. Barnaamijkan waxaa loogu talagalay in lagu caawiyo kuwa si xun u dhibaatooday sababa la xiriira xaddidaadda xaddiga xashiishadda canugga. Barnaamijka waxaa sidoo kale loogu talagalay inuu ka faa'ideysto kuwa ku nool meelaha faqiirnimada ah qabqabashada la xiriirta maandooriyaha iyo xabsiyada. Sida uu qabo sharciga cusub.
“Golaha Guud wuxuu sii raadsanayaa oo cadeynayaa inay lagama maarmaan tahay in la hubiyo isku xirnaan iyo cadaalad in lagu dhaqmayo sharcigan Gobolka oo dhan”.
Sidee Sharciga cusub saameyn ugu yeelan doonaa Codsadaha Sinnaanta Bulshada?
Sharciyeeynta isticmaalka marijuana raaxada ee Illinois waxay si togan u saameyn doontaa qof kasta oo gobolka ku nool, mana ahan oo keliya macaamiisha marijuana. Si loo xaqiijiyo sinnaanta bulshada, sharciga waxaa loo habeeyay inuu u fududeeyo bulshooyinka la fogeeyo inay helaan rukhsadaha shatiyada. Intaa waxaa sii dheer, qof kasta oo si sax ah u codsada sinnaanta bulshada wuxuu dhalin doonaa in ka badan 20% dhibcaha la siiyo codsadayaashaas. Qodobbadaas waxaa loo qaybin doonaa fasallo kaladuwan oo loogu talagalay codsadayaasha xarumaha wax-soo-saarka ee shuruudu ku xidhan tahay, farshaxanka koraysa, ama miisaska.
Sida sharcigu qabo, codsadaha sinnaanta bulshada wuxuu noqon doonaa qof kasta oo ah degane Illinois, isagoo ku noolaa qeyb ka mid ah sida ugu baahsan ee saameysay gobolka ugu yaraan 5 10kii sano ee la soo dhaafay. Kuwani guud ahaan waa meela badan oo xarigyo badan, xukunno, iyo xabsi-ku-yaal lagu sameeyay kadib markii lagu xadgudbay falkii xashiishadda ee waagii hore. Kuwa diiwaanadooda lagu baabi'iyay falkan ayaa sidoo kale u qalma sinaanta bulshada.
Waa kuwee Arimaha Arimaha kale ee Bulshada ee Sharcigaan Wax ka Yeelanayo?
Sharciga ayaa tixgelin doona xuquuqda shaqaalaha ee warshadaha marijuana. Si ka duwan sidii waagii hore ee lagu takooro shaqaalaha warshadaha marijuana, waxay hadda ku raaxeysanayaan ilaalin la mid ah tan shaqaalaha warshadaha kale.
Ka waran Sanduuqa Horumarinta Ganacsiga ee Illinois?
Sida ku cad sharciga cusub ee sharci dejinta xashiishadda gobolka Illinois, “Khasnadda dawladda waxaa laga abuuray sanduuq khaas ah, oo loo samayn doono si gooni ah oo ka duwan dhammaan heerarka kale ee dawladda, ee loogu magac daray Sanduuqa Horumarinta Ganacsiga Cannabis”.
Kani waa xirmo qaas ah oo si gaar ah loogu talagalay dadka doonaya inay galaan warshadaha marijuana. Kitty-ka waxaa loogu talagalay in loo isticmaalo in lagu maalgeliyo, lagu taageero, oo loo fududeeyo dadka doonaya inay ku biiraan warshadaha marijuana laakiin ku liitaa xagga dhaqaalaha.
Siyaabaha qaarkood ee ay maalgalintan gacan uga geysan karto waxaa ka mid ah:
Bixinta amaahda leh dulsaar hooseeya. Amaahan amaahda waxaa u adeegsan doona codsadayaasha sinnaanta bulshada si ay u aasaasaan meheradaha xashiishadda illaa iyo inta ay shati u leeyihiin si sharciga waafaqsan.
Bixinta deeqda codsadayaasha sinnaanta bulshada ee laga yaabo inay bilaabaan oo ay ka shaqeeyaan meheradaha cannabis laakiin aan lahayn awooda maaliyadeed inay sidaas sameeyaan.
Bixinta lacagbixinta loogu talagalay ka faa'iideysiga codsadayaasha sinnaanta bulshada
Bixinta cilmi baarista loogu talagalay in lagu dhiirrigeliyo kaqeybgalka haweenka, naafada, iyo kooxaha laga tirada badan yahay ee bulshada dhexdeeda.
Sababta Barnaamijka Sinnaanta Bulshadu U Fikrad fiican tahay
Kuwa xabsi ku jira ama la xiraa waxay inta badan la kulmaan saameyn aan wanaagsanayn oo waara. Tani waa sababta oo ah shaqo-bixiyeyaasha badankood ma shaqaalaan doonaan qof leh diiwaan, halka kuwa kalena si fudud u kala takooraan kuwii hore u xukumay. Xaqiiqdii, kuwa horey loo qabtay xashiishadda sababtoo ah haysashada marijuana way sii xanuunsanayaan xitaa kadib markii isla adeegsigaas sharci laga dhigay. Labada qof ee isqaba, carruurta, iyo ehelka dadka ay dhibaatadu soo gaadhay waxay sidoo kale la il daran yihiin dhaqaale ahaan iyo shucuur ahaan markay eheladooda xabsiga galaan.
Barnaamijkani wuxuu bixiyaa dheefaha codsiga liisanka iyo kaalmada maaliyadeedba dadka ay saameeyeen sharciyada fulinta xashiishadda si toos ah ama si aan toos ahaynba.
Kumaa uqalma Codsiga Sinaanta Bulshada?
Codsadayaasha sinnaanta bulshada waa shaqsiyaad buuxiya shuruudaha ugu yar ee u qalma rukhsad shuruudaysan si ay ugu shaqeeyaan ganacsiga marijuana gobolka gudahiisa. Shuruudahan qaarkood waxaa ka mid ah:
Shakhsiga deggan deegaanka u qalma tixgelinta sinnaanta bulshada. Deganaanshaha kiiskan micnaheedu waa lahaanshaha heshiis kiro oo saxeexan oo leh magaca codsadaha ama kireynta hantida.
Kaarka codbixinta, laysanka darawalka, jeegga mushaharka, iyo nooc kasta oo kaadh aqoonsi ayaa loo isticmaali doonaa go'aaminta deganaanshaha.
Muxuu sharcigu ka odhanayaa dembiga xad-gudubka ah?
Kuwa u shaqeeyay waqti qaadashada marijuana iyo adeegsi ayaa sidoo kale sharciga lagu qaddariyo. Sida ku xusan sharciga cusub ee Illinois, marka dambi la shaabadeeyo ama la dhoofiyo, shaqaalaha looma baahna inuu u muujiyo dembiyadiisii ​​hore ee loo shaqeeyaha mustaqbalka. Taas ayaa la yiri, sharciga looguma talagalin in lagu xadido loo shaqeeyaha illaa iyo inta waajibaadka laga hadlayo. Loo shaqeeyeha wuxuu wali xaq u leeyahay inuu sameeyo baaritaanka taariikh nololeedkiisa isla markaana raaco isla nidaamka shaqaalaysiinta ee ay u isticmaalaan shaqaalaha kale.
Maxaad Sameyneysaa Haddii Aad Uqalanto Inaad Ka Faa'iideysato Sahaminta Sinnaanta Bulshada?
Shaki kuma jiro in wershadaha xashiishka ay tahay mid lacag badan. Haddii aad rabto inaad ganacsi ka sameysato warshaddan oo aad u qalanto tixgelinta sinnaanta bulshada, waa inaad tixgelisaa gudbinta dalabkaaga qeybta qaybta sinaanta bulshada.
Haddii aad nasiib badan tahay, dalabkaagu kaliya ma ahan oo kaliya in la oggolaado laakiin waxa kale oo aad ka faa'iidaysan kartaa maalgalinta gobolka ee u dejin doonta ganacsigaaga oo hor dhigi kara tartanka. Akhbaarta wanaagsan ayaa ah in maaliyaddu aysan kaliya ahayn mid la awoodi karo laakiin ay tahay mid ay gaari karaan dadka danyarta ah ee ku nool Illinois.
La xiriir qareen cannabis aqoon u leh haddii aadan hubin habka dalabka ama haddii aadan aqoon sida ugu wanaagsan ee looga faa'iideysan karo dhibcahaaga sinnaanta bulshada.
Qoraalka Sinnaanta Bulshada
Maxaa dhacaya, Waxaan ahay Tom - i raadso adigoo gariiraya garyaqaanka Cannabis, ka dibna gujinaya bartayada websaydhka, warshadaha ganacsiga cannabis Attorney.com. Ilaha khadka tooska ah ee loogu talagalay dhammaan su'aalahaaga ee ku saabsan wareejinta warshadaha xashiishadda - sida mawduuca maanta kulul ee Illinois - Codsadayaasha Sinnaanta Bulshada.
Waxaan si sax ah u galaynaa oo waxaad ku ogaan doontaa sharcigan si ka fiican 99% dadka haddii aad fiiriso ilaa dhamaadka, maskaxda ku hay waxyaabaha halkaas ka qarxa - laakiin sharciyada YouTube, waa inaan ku xasuusiyaa inaad jeceshahay oo aad iska diiwaan galiso.
Qaybta 7aad ee Sharciga waxay la xiriirtaa codsadayaasha sinnaanta bulshada - laakiin kuma dhex noolaan karno halkaas illaa hadda - waxaan marka hore u baahanahay inaan dib u eegno qeexitaanka macnaha ee codsadaha sinnaanta bulshada ee hoos timaada sharciga Illinois - marka aan u baxno qeexitaannada.
Codsadaha Sinnaanta Bulshada " waxaa loola jeedaa codsade ah degane Illinois oo buuxiyo mid ka mid ah shuruudaha soo socda:
Ma aragtay farqiga u dhexeeya - shirkadaha yaryar waxay u baahan yihiin labadaba "lahaansho iyo xakameyn" codsadayaasha sinnaanta bulshada, laakiin shirkadaha waaweyni waxay u baahan yihiin tirada shaqaalaha ee tirada yar. Markaa waad ilaalin kartaa maaraynta iyo maaraynta si kastaba ha noqotee haddii aad rabto.
Dhanka kale, guddiga agaasimayaasha - milkiilayaasha iyo maamuleyaasha shirkada runtii waxay noqdaan koox jimicsi dhisme ah - mana sugi karaan inay kaa caawiyaan taas.
Hadda oo aan ognahay waxa uu yahay Codsadaha Sinnaanta Bulshada - maxay tahay sababta aan u rabno in aan ka mid noqonno? Sababta oo ah sharciga ayaa ka doorbidaya 2 siyaabood oo aad u cad: 1) iyadoo la siinayo ugu yaraan 20% dhibcaha gooldhalinta dalabka iyo farsamooyinka kobaca xirfadaha iyo 2) iyadoo la siinayo fursad ay ku hesho deyn dowladeed oo hooseysa si loo naaquso caqabadaha galaya soo galitaanka suuqa cannabis sharciga ah. .
Qaybta 7-10 ee sharciga cusub ee xashiishadda cannabis wuxuu abuuraa Sanduuqa Horumarinta Ganacsiga Cannabis si loo siiyo amaah amaah dulsaar ah codsadayaasha sinnaanta bulshada si loogu bixiyo kharashyada ganacsiga ee looga baahan yahay inay ku shaqeeyaan ganacsigooda xashiishad.
Dheeraad ah, deeqo ayaa loo heli karaa "codsadayaasha sinnaanta bulshada ee aqoonta leh" si loogu bixiyo kharashaadka ganacsiga caadiga ah ee lagama maarmaanka u ah bilaabida iyo socodsiinta ganacsigooda xashiishad.
Waa maxay “codsade sinaanta bulshada uqalma”? Waxaan dib ugu noqonnaa qeexitaannadii si aan u helno inay tahay:
"Codsade Sinaanta Bulsho oo Uqalma" macnaheedu waa Codsade Sinaanta Bulshada oo lagu siiyay liisanka shuruudaysan sida ku xusan Xeerkan si uu uga shaqeeyo aasaaska ganacsiga cannabis.
Wanaagsan - waa maxay "shatiga shuruudaysan"?
Ruqsadda Ururinta Adeegga Dadka Waaweyn ee Sharci Ahaan ah) macnaheedu waa ruqsad la siinayo codsadayaasha dhibcaha ugu sarreeya ee Ruqsadda Ururinta Adeegga Dadka Waaweyn ee leh xaq u lahaanshaha adeegsiga dadka waaweyn ee bixiya rukhsadda ururka haddii codsaduhu buuxiyo shuruudaha qaarkood ee lagu qeexay Xeerkan, laakiin xaq uma laha qaataha wuxuu bilaabayaa iibsashada ama iibinta xashiishadda cannabis ama waxyaabaha cannabis-infused.
Hagaag, waa shirkad la helay, laakiin kahor intaysan furin - Coool… waxaad isku dayi kartaa inaad hesho deeqo haddii heerkaaga codsadaha Sinnaanta Bulshada uu ku siiyo liisanka… ka dib waad dalbanaysaa deeqaha… ka dibna waad dhisaysaa markaa fur. .. Ma kobcin karnaa xashiishadda cannabis iyo helitaanka deeqda? Aynu hubino.
Oh qabow, waxaa jira ruqsad soo saarista shuruud leh.
Ruqsadda Xarunta Aqoonta Beeraha ee Dadka Waaweyn "Sharuudaha" macneheedu waa ruqsad la siiyay codsadayaasha gooldhalinta ugu sarreeya ee Ruqsadda Xarunta Beerashada Isticmaalka Dadka Waaweyn ee leh xaq u yeelashada Ruqsadda Xarunta Beeraha ee Dadka Waaweyn haddii codsaduhu buuxiyo shuruudaha qaarkood sida ay go'aamisay Waaxda Beeraha qaanuunka. , laakiin xaq uma siinayo qofka helaya inuu bilaabayo kobcinta, ka baaraandegida, ama iibinta xashiishadda ama waxyaabaha cannabis-ka la isku daray.
Waa hagaag immisa liisamo ayaa jira? 30 - Waa qabow, laakiin sug inta ciyaartoyda hadda jirta ay awow u noqonayaan, immisa waa kuwa, 20 - nuts, ok ok waxaan u hooseynaa 10.
Waa hagaag laga yaabee inay weligeedba ka sii xumaanayso intaas maxaa yeelay,
Qaybta 20-15. Codsiga Xarunta Dhirta Isticmaalka Dadka Waaweyn Shuruudaysan. (a) Haddii Waaxda Beeraha ay bixiso rukhsad dheeri ah oo ku saabsan xarunta wax-soo-saarka sida ku xusan Qaybta 20-5, codsadayaasha Shatiga Wax-u-Adeegsiga Dadka Waaweyn ee Sharci ahaan ah waa inay soo gudbiyaan qaab elektaroonig ah sida Wasaaradda Beeraha ay u tilmaami karto:
Marka si loogu isticmaalo koritaanka dadka waaweyn ee sharuudaha ku dhaca, in ka badan 10ka xaadir ee hadda jira waxay u baahan yihiin inay ku yimaadaan khadka tooska ah, oo aad u badan, marka aynu xoog u nimaadno deeqaha noocaas ah oo aan aragno noocyada maalgelinta ee jira.
(c) Amaahda lagu sameeyay Qaybtan:
(1) waxaa la sameyn karaa oo keliya haddii, go'aanka Waaxda, mashruucu uu sii xoojiyo yoolalka lagu qeexay sharcigaan; iyo
(2) waa inuu ahaadaa qadarka noocaas ah iyo foomka oo uu kujiraa shuruudahaas iyo qodobbada la xiriira amniga, caymiska, warbixinta, eedeymaha khaldan, daawooyinka asalka ah, iyo arrimo kale sida ay Wasaaraddu u go'aamineyso inay habboon tahay in la ilaaliyo danaha guud iyo inay ahaato mid joogto ah iyada oo ujeedooyinka Qaybtani tahay. Shuruudaha iyo qodobbada ayaa laga yaabaa inay ka yaraadaan wixii loo baahan yahay amaahda la midka ah ee uusan daboolneyn Qeybtaan.
(d) Deeqaha lagu sameeyay Qeybtaan waxaa lagu bixin doonaa qaab tartami iyo sanadle ah iyadoo loo cuskanayo Sharciga Xisaabtanka Grant iyo Transparency Act. Deeqaha lagu sameeyay Qeybtaan waa inay sii ahaadaan oo ay horumariyaan hadafyada Xeerkan, oo ay ku jiraan kor u qaadista Codsadayaasha Sinnaanta Bulshada, tababbarka shaqada iyo horumarinta xoogga shaqaalaha, iyo kaalmada farsamada ee Codsadeyaasha Sinnaanta Bulshada.
Marka taasi waxay ina siineysaa su'aal - waxaan sameyneynaa codsiyada ugufiican, sidaa darteed waxaan dooneynaa inaan helno dhibcaha sinnaanta bulshada, laakiin miyaan ku daraynaa geedi socodka qorista deeqda codsiyada - waxaan aaminsanahay inaad tahay inaad sare u qaaddo qodobbada.
20% ee dalabkaaga ayaa kuu tagaya adiga oo ah codsadaha sinaanta bulshada. Laakiin waxay umuuqataa in dad badani uqalmayaan, in kabadan 800,000 oo u furan guuritaanka sharciga hoostiisa, iyo dadka ku nool bulshooyinka saboolka ah - laakiin muxuu yahay farriintaada bulshada u keentaa bulshadaas si ay uga caawiso hagaajinta dhibaatooyinka dagaalka daroogada? Hagaag tani waa meesha sheekada guud ee shirkaddaadu runti ku kori karto oo bulshada u keento isbedel wanaagsan.
Kuwani waxay u baahan yihiin inay galaan qorshahaaga tababarka iyo wacyi gelinta bulshada. Bal ka fikir haddii ay qaybintaadu kafaalaqaadayso uumiga iyo carwada shaqada sanad walba? Wadashaqeynta ururada baararka maxaliga ah iyo ganacsiyada xashiishadda ee u baahan shaqaale tababaran.
Kuwani waa waxyaabaha ay shirkaddaada - gaar ahaan haddii ay u dhaqaaqeyso qodobbada sinnaanta bulshada - ay tahay inay tixgeliso markii la isugu keenayo codsigeeda liisanka xashiishka.
Ma ku amaahdeen amaahda? - ma dhici karto. Marna xaq uma lihid amaah, ama deeq - waa inaad u-qalanto. Haysato maalgalinta si isku mid ah. Codsiyada ayaa qaali ku noqon doonta markabka sababta oo ah wey weyn yihiin - iyo in kasta oo dadka qaarkiis ay rumeyn karaan, qareennada ayaa u baahan in la siiyo waqtigooda iyo xooggooda. Gaar ahaan haddii qareenkaaga uu ganacsi ahaan casri ku filan yahay inuu haysto wax ka yar shan milyan oo doolar iyo saamiyada la doorbido ee kaqeybgalka dheeriga ee codsadayaasha sinnaanta bulshada
Waad ku mahadsan tahay inaad igu soo biirtay qaybtan - xusuusnow, sharciyeynta marijuana waa bilo dhawr ah oo kaliya - sidaa darteed bilaw inaad isku dubbarideyso qorshooyinkaaga kiliinikada & Isdiiwaangalinta si aad u ogaato ilaa iyo waqtiga. Oo hadaad u baahatid caawimaaddeyda, kaliya google cannabis qareenka oo ila soo xiriir. Goor dhow baan ku arki doonaa
Isticmaalka Raxmadda ah ee Barnaamijka Barnaamijka tijaabinta daroogada cannabis ee sanadka 2014
The Isticmaalka naxariis ee Xeerka Barnaamijka Xannaanada Caafimaadka Cannabis u oggolaaday adeegsiga marijuanaata caafimaad aad ayey u xaddidan tahay dadka doonaya inay maal gashadaan warshadaha marijuana. Ficilkan ayaa la yimid caqabado sababay inay dadka ku adkaato inay ganacsi ku yeeshaan waaxdan. Milkiilayaasha hadda tirada yar ma ahan kuwo ka turjumaya tirada guud ee gobolka maxaa yeelay waxay xireysaa qof kasta oo aan haysan ilaha ama aqoon u leh sida ganacsi looga sameeyo waaxdan.
Barnaamijka sinnaanta bulshada ayaa la sameeyay ka dib markii barnaamijka tijaabada ah la ogaaday inuu eexsan yahay. Barnaamijkan waxaa loogu talagalay in lagu caawiyo kuwa si xun u dhibaatooday sababa la xiriira xaddidaadda xaddiga xashiishadda canugga. Barnaamijka waxaa sidoo kale loogu talagalay inuu ka faa'ideysto kuwa ku nool meelaha faqiirnimada ah qabqabashada la xiriirta maandooriyaha iyo xabsiyada. Sida uu qabo sharciga cusub. "Golaha Guud wuxuu sii ogaanayaa oo cadeynayaa inay lagama maarmaan tahay in la hubiyo isku xirnaan iyo cadaalad in lagu dhaqmayo sharcigan Gobolka oo dhan."
Sidee Sharciga cusub saameyn ugu yeelan doonaa bulshada?
Sharciyeeynta isticmaalka marijuana raaxada ee Illinois waxay si togan u saameyn doontaa qof kasta oo gobolka ku nool, mana ahan oo keliya macaamiisha marijuana. Si loo xaqiijiyo sinnaanta bulshada, sharciga waxaa loo habeeyay inuu u fududeeyo bulshooyinka la fogeeyo inay helaan rukhsadaha shatiyada. Intaa waxaa sii dheer, qof kasta oo dalbada sinnaanta bulshada wuxuu si otomaatig ah u heli doonaa 25 dhibcood oo gunno ah. Qodobbadaas waxaa loo kala saari doonaa fasallo kala duwan ee codsadayaasha leh sinnaanta bulshada iyo kuwa ku saleysan Illinois.
Waa kuwee arrimaha kale ee bulshada ee sharcigan ka hadli doono?
Ka waran Sanduuqa Horumarinta Ganacsiga?
Sida uu qabo sharcigaan, “Khasnadda dowladda waxaa laga abuuray sanduuq gaar ah, oo lagu qaban doono si ka duwan dhammaan heerarka kale ee dowladda, ee loogu magac daray Sanduuqa Horumarinta Ganacsiga Cannabis”.
La xiriir a qareen cannabis aqoon u leh haddii aadan hubin habka dalabka ama haddii aadan aqoon sida ugu wanaagsan ee looga faa'iideysan karo dhibcahaaga sinnaanta bulshada.